Tartankii u dhexeeyey Kooxaha Manchester United & Chelsea ee ku aaddanaa saxiixa Jadon Sancho oo halkiisa ka sii socda – Gool FM
(Manchester) 03 Feb 2020. Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay si fool ka fool ah kula tartanto kooxda ay Premier League ku xafiiltamaan ee Chelsea saxiixa xiddiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Xiddiga reer England ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigaya kooxdiisa Dortmund xilli ciyaareedkan, isagoo si toos ah uga qeyb qaatay 24 gool 18 kulan oo uu u saftay kooxdiisa horyaalka Bundesliga.
Chelsea ayaa lagu xamanayaa inay 9 milyan oo heshiis ah u soo bandhigtay 19-sano jirka suuqi dhawaan xirmay ee bisha Janaayo, laakiin u dhaqaaqistaas wax walba ayaa fashil ku dhamaaday.
Si kastaba ha ahaatee, Warsidaha Evening Standard ayaa soo jeedinaysa in Blues ay haatan tartan adag kala kulmeyso Kooxda Man United kaasi oo ku aaddan da’yarka weerarka ka ciyaara ee reer England, Jadon Sancho.
Red Devils ayaa kala soo wareegtay Bruno Fernandes Kooxda Sporting Lisbon heshiis dhan 68 milyan oo gini horraantii isbuucaan, laakiin warbixinta ayaa muujinaysa in Ole Gunnar Solskjaer ay maamulka kooxdiisa siiyeen fursad uu ugu dhaqaaqi karo garabka Naadiga Borussia Dortmund ee Sancho.
Sancho ayaa diiday qandaraas cusub oo uu ku sii joogi lahaa kooxdii uu fursadda ka waayay ee Man City si uu ugu biiro kooxda Dortmund xagaagii 2017-kii tan iyo waqtigaasna Sancho waxaa uu mujiyay awood aan innaba caadi ahayn.